प्यूठान, बिहिवार लुम्बिनी प्रदेशमा भएको नयाँ सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्यूठानका प्यूठानबाट निर्वाचित कृष्णध्वज खड्काले पाएका छन् ।
मन्त्रीसंगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रवक्ताको भूमिका समेत उनैलाई दिइएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)का केन्दिय सदस्य तथा प्यूठान जिल्ला ईन्चार्ज समेत रहेका खड्का नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने र राजनीतिक स्थायित्व निर्माण गर्ने अभिप्रायका साथमा निर्माण भएको बामगठबन्धनका तर्फबाट प्रदेश सभाको निर्वाचनमा होमिएका थिए । प्यूठान प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएकाम थिए । नेतृत्वका कारण बाम गठबन्धको आयु समाप्त भएपनि जनताका सपनाहरु पूरा हु्न बाँकी छन् । यसै सन्दर्भमा सांसदको पदावधि १६ महिना बाँकी छदा मन्त्री बनेका कृष्णध्वज खड्काले सरकारको भूमिकामा रहेर कति जनचाहनाका कामहरु वा विकास गर्न सक्दछन् त्यो समयले देखाउने नै छ ।
कृष्णध्वज खड्काका भोगाई
कम्युनिष्ट आन्दोलनको लामो पृष्ठभूमि भएका, कम्युनिष्ट क्रान्तिमा निरन्तर योगदान र निष्ठा बोकेका कृष्णध्वज खड्का माओवादी बृत्तमा योगदानका हिसावले सिनियर मानिन्छन् । जनयुद्ध प्रारम्भ पश्चात अध्यक्ष प्रचण्डको प्रतिनिधिको रुपमा खटिइ तत्कालिन राजदरवार, संसदीय राजनीतिक दलहरु, कुटनितिक नियोग, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था संग वार्ता÷संवाद गर्ने उच्च जिम्मेवारी र भूमिका कृष्णध्वज खड्काले कुशलतापूर्वक निभाएका थिए । २०५८ सालमा भएको पहिलो चरणको सरकार र माओवादी वीच भएको वार्ताको ब्यबस्थापन गर्ने जिम्मा खड्काकै थियो । उक्त वार्ता असफल भएपछि तत्कालिन शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संकटकाल घोषणा गरी माओवादी माथी तिव्र दमन र धरपकडको श्रृङखला सञ्चालन ग¥यो । यसैक्रममा कृष्णध्वज खड्का र माओवादी नेतृ तथा उनकी जीवनसंगिनी रेखा शर्मालाई तत्कालिन शाहीसेनाले गिरफ्तार गरी एक बर्ष वेपत्ता बनायो । वेपत्ता अवस्थामा राखी खड्का दम्पत्तीलाई निर्मम यातना दिइयो । कठोर यातनाका कारण खड्काको दुवै खुट्टा र हात भाँचियो । ढाडमा गम्भिर चोट लाग्यो । अहिले उनको हात खुट्टा फलामे रडको भरमा अडिएका छन् । निर्मम पिटाइका कारण खड्का र शर्मा दिर्घरोगी बनेकाछन् । अतः कृष्णध्वज खड्का एकजना जिउँदा सहिद हुन् । कम्युनिष्ट क्रान्तिमा उनले बलिदानको कोटा चुक्ता गरेका छन् ।
प्यूठानीले के आशा गर्ने ?
प्यूठान जिल्ला कम्युनिष्टका नेताहरु जन्माउने थलोका रुपमा चिनिन्छ । मोहन विक्रम सिंह, मोहन वैद्य, बामदेव गौतम, मणी थापा, लिलामणी पोख्रेल, कृष्णध्वज खड्का, लगायतका केन्द्रिय नेताहरु प्यूठानमा जन्मिएका हुन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा यी पात्रहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । प्यूठान जिल्लाले यति धेरै राष्ट्रिय भूमिका प्राप्त नेताहरु जन्मायो तर अपेक्षाकृत रुपमा जिल्लाको विकास हुन सकेन । सत्ताको पहुँचबाट सधै टाढा बस्नु पर्ने नियती प्यूठानीले भोग्नु पर्यो । कम्युनिष्ट राजनीतिको शिर्ष भूमिकामा रहे पनि प्यूठान जिल्लामा जन्मेका कम्युनिष्ट नेताहरु राज्यसत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ठाउँमा पुग्न सकेनन् । अथवा चाहेर पनि सरकार सञ्चालन गर्ने भूमिकामा बलशाली ढंगले उभ्याउन सकेनन् । २०७० सालको निर्वाचनमा बामदेव गौतमलाई निर्वाचित गरी आफ्नो विकासको भोक मेटाउने प्यूठानीको चाहना पनि अस्थिर राजनीतिका कारण पुरा हुन सकेन ।अवैधानिक बाटोबाट मन्त्री बनेका मणी थापा र हरी रिजालको मन्त्री पदपनि लामो समय टिक्न सकेन । त्यसको नेतृत्वको जिम्मेवारी र भूमिका ऐतिहासिक आवश्यकता, आकस्मिकता र क्षमताको उपयुक्त संयोजन सहित प्रभावशाली नेता कृष्णध्वज खड्कालाई प्राप्त हुन पुगेको छ । केन्दमा मनमोहनको जसरी छोटो अवसरलाई सदुपयोग गर्दै प्यूठानी जनताको बर्षौदेखिको समृद्धी सपना साकार पार्ने अवसरलाई प्रदेशमा लोकप्रिय बनाउने कुरालाई वेलैमा हृदयङ्गम गर्न मनासीव देखिन्छ ।